Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Mitohy ny fandrebirebem-bahoaka
Inty sy Nday : Mitohy ny fandrebirebem-bahoaka
Isan’ny endri-javatra tsy hain’ny mpitondra nifandimby teto ny manavaka ny “olana fototra” (probleme fondamental) amin’ny “olana fanampiny” (probleme secondaire) izay mitranga eo anivon’ny fiainam-pirenena. Raha hevitra ifanoherana na ifaninana no asian-teny dia misy ny ambara hoe “fifanoherana fototra” (contradiction principale) sy ny “fifanoherana fanampiny” (contradiction secondaire). Eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana, raha vao tsy hain’ny mpitondra ny mamantatra ny olana fototry ny raharaham-pirenena (probleme fondamental) dia toy ny mpitsabo tsy mahafantatra ny fototr’aretin’ny olona marary eo anoloany izany ka fanafody hafa no omeny ilay marary. Toraka izany koa ny raharaham-pirenena satria vahaolana tsy izy no ampiharina fa ny fototr’olana mitoetra hatrany.
Ny tian-kivoitra amin’izany dia tsotra. Manapa-kevitra indray ny fitondram-panjakana ankehitriny fa ny anaran’ny vondrom-pitaterana an’habakabaky ny firenena Malagasy “Air Madagascar” dia hovaina hoe “Madagascar Airlines”.
Dia mirehaka ny fitondram-panjakana fa “manao zavatra”. Aoka re ry zalahy e ! Izay mba vahaolana mahomby hampandeha sy hivelaran’ny firenena ary hisitrahan’ny vahoaka ny tombontsoa tokony ho azy re andaniana andro sy ron-doha fa aza izao haingitraingitra rehetra izao e !
Raha ity resaka vondrom-pitaterana an’habakabaka “Air Madagascar” ity no asian-teny, na hovaina isam-bolana aza ny anarany, tsy izay no ho fototry ny vahaolana na hamaha ny geja mamatotra azy amin’izao fotoana.
Tsy maninona fa ovay ny anarany, ary ataovy isan-taona ny fanovana fa aza rebirebena ny amin’izany ny saim-bahoaka.
Ny vahoaka izao dia manantena fa noho ny fahaizan’ny fitondram-panjakana, noho ny fahombiazan’ny vahaolana nentin’ny minisitry ny fitaterana Tinoke Roberto, araka ny nambarany raha vao voatendry tamin’io andraikiny io izy, dia ny hizoran’ny tontolon’ny orin’asa Air Madagascar sy ny ho fahafahan’ny fiaramanidin’ny Air Mad miasa avy hatrany raha vao misokatra ny sisin-tanintsika.
Fandrebirebem-bahoaka ny fanovana ny “Air Mad” ho “Madagascar Airlines” satria tsy ny anaran’ny oron’asa no nampikatso azy na nahatonga azy ho bokan-trosa na niteraka ny fanararaotana ka nampidangana ny faktioran’olona tamin’ny Air Mad.
Mampahatsiaro ny teo amin’ny tontolon’ny raharaham-pampianarana. Tamin’ny Repoblika voalohany dia “EPP” “Ecole Primaire Publique” no niantsoana ny fanabeazana fototra. Tonga ny Repoblika faharoa dia natao hoe “SFF” na “Sekoly Fanabeazana Fototra”. Raha vao niakatra teo amin’ny fitondrana tetezamita tamin’ny 1991 ny Praiminisitra Razanamasy dia naverina hoe “EPP” indray ny fiantso azy, mandrak’ity ny androany.
Dia nampiakatra ho azy ny fari-pahaizan’ny mpianatra Malagasy izay tsy nitsaha-nitsotsorika ve izany ? Nampihazakazaka ny fiakatry ny isan’ny mpianatra mandeha mamonjy fianarana ve izany ?
Aoka re izay ity fandrebierebem-bahoaka io e !